.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: လေးဖြူ - Songs Collection
လေးဖြူ - Songs Collection
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Rock ဂီတလောကမှာ လူအများ လေးစားကြသလို ၊ သူ့သီချင်းတွေကို လူကြိုက်များတဲ့
Rocker ကြီး လေးဖြူရဲ့ သီချင်းတွေကို Collection လေးတစ်ခု လုပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီချင်းတွေကတော့
သိပ်မစုံပါဘူး။ သူဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေက အရမ်းများတော့ အကုန်လုံး တင်ဖို့က သိပ်မလွယ်ဘူး။ လောလောဆယ်
သီချင်း 23 ပဲ တင်ထားရပါသေးတယ်။ နောက်နေ့တွေကျမှ တစ်ဖြေးဖြေးခြင်း ထပ်ပြီး တင်ပေးသွားပါမယ်။ နောက်
သူငယ်ချင်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လေးဖြူရဲ့ သီချင်းတွေကိုလည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပါ။
1 တိမ်ဖုံးတဲ့လ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
2 အဖေ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.70 MB
3 အလွမ်းများ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.70 MB
4 အလှဆင်လိုက်ပါ ဒီကမ္ဘာ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
5 ဒိုင်ယာရီ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
6 နှလုံးသွေးများရပ်တန့်သွားပါစေ လေးဖြူ ၊ ဂျက်မြသောင်း Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
7 အလဲအကွဲ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.70 MB
8 အလွမ်း လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.20 MB
9 အမဲလိုက်အက လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 1.80 MB
10 အသဲကွဲသီချင်းသစ် လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 1.90 MB
11 အရင်လိုပါပဲ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.30 MB
12 ဒဏ္ဍာရီကျွန်း လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.20 MB
13 တို့ပြန်တွေ့မယ့်အချိန် လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.80 MB
14 ခဏလေးများ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 1.80 MB
15 လေလွင့်သူ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.40 MB
16 မျှော်လင့်ခြင်းလေး လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 3.50 MB
17 မင်းမှမင်း လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 1.80 MB
18 ငါ့ရဲ့လမင်း လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
19 နောက်ဆုံးရထား လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
20 ပြန်ခဲ့ပါ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 1.90 MB
21 စာမျက်နှာ ၁၅ လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 1.90 MB
22 တန်ဖိုး လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.00 MB
23 သံယောဇဉ် လေးဖြူ Click Here !! Click Here !! 2.00 MB
Posted by Thurainlin at 07:26